Farmaajo Oo Waraaqaha Aqoonsiga Ka Guddoomay Danjirayaasha Tansaaniya Iyo Angoola - Bulsho News
Galmudug: ” Waxaan qaadi doonaa dagaal rogaan celin ah oo...
Alshabaab oo iska fogeysay in ay ka dambeysay dilka Ikraan...
Madaxweynaha muddo xileedkiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa munaasabad ku qabsoontay Madaxtooyada Qaranka waxaa uu kaga guddoomay Waraaqaha Aqoonsiga danjirenimo safiirrada dalalka, Tansaaniya Dr. John S. Simbachawene iyo Angoola Sianga Kivuila Samuel Abilio.
Danjiraha Jamhuuriyadda Tansaaniya John S. Simbachawene ayaa Madaxweynaha la wadaagay farriin iyo salaan uu uga siday Madaxweynaha dalkiisa Marwo Samia Hassan, taas oo ku aaddan xiriirka soojireenka ah ee ka dhexeeya Labada Dal.
Madaxweynaha ayaa u rajeeyey Danjire John S. Simbachawene in uu ku guulaysto gudashada waajibaadka loo igmaday iyo doorka uu ka qaadan karo xoojinta xiriirka walaaltinnimo ee ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Tansaaniya.
Dhankiisa, Danjiraha cusub ee Jamhuuriyadda Angoola Sianga Samuel Abilio ayaa soo bandhigay sida ay uga go’an tahay adkaynta xiriirka ka dhexeeya Soomaaliya iyo Dalkiisa, gaar ahaan dhinacyada iskaashiga dhaqaalaha, maalgashiga, diblomaasiyadda iyo isu-socodka. Isaga oo uga mahadceliyey shacabka iyo dowladda Soomaaliya soo dhoweynta diirran.
Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la wadaagay Danjiraha cusub ee dalka Angoola sida ay uga go’an tahay Dowladda Federaalka Soomaaliya xoojinta xiriirka ku saleysan iskaashiga, dan-wadaagga iyo saaxiibtinnimada ee ay la leedahay dalalka kale ee Qaaradda.
Roberto Martinez Oo Ka Hadlay Wararka La Xidhiidhinaya...
Farmaajo iyo Fahad Yaasiin oo baajiyay qorshe uu...
Australia PM says no opportunity for meeting with...
Some Haitians at U.S. border released, others deported...
Ex-cops accused of violating Floyd’s rights to be...
Galmudug oo sheegtay in ay la wareegtay Saldhigyo...
Waare oo shaaca ka qaaday dad kale oo...
Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud oo halmbalyo u...
Emmy Moments: Not the Pandemmys — but hardly...
Fanaanada Muna Xidigta oo ku geeriyootay Muqdisho
Biden: Dowlada iyo Ciidanka Afghanistan diyaar uma ahayn...
GALMUDUG oo shaaca ka qaaday cidda fashilsay wada-hadalkii...
Madaxweyne Deni Oo Lagu Soo Dhoweeyey Muqdisho